လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းများရရှိနိုင်အေရာင္ေတြ၊အများကြီးရှိပါတယ်ကြောင့်သင်တို့အဘို့အ။ ရှိမရှိသင်အသစ်များကိုကမ္ဘာနှင့်လိုအပ်အချို့ဂိမ်းများနှင့်အတူစတင်ရ၏ကစားစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရှာဖွေနေများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီဂိမ်းသင့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအရာတစ်ခုခုလူတိုင်းအတွက်။ သင်တန်း၏၊၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အမြဲတမ်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သောအချို့သောအန္းအားကစားပြိုင်ပွဲနားထောင်ခြင်းအပေါ်။ ရှိပါတယ်နှစ်ခုအမျိုးအစား:အားကစားသောသူအရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းအပေါ်ဖုန်းနှင့်သောသူတို့အိပ်တဲ့အခါသူတို့ကပြောမကစားပါဘူးဒီဂိမ်း။, အဆိုပါဂိမ်းလည်းအများအပြားနှင့်တစ်ခါတစ်ရံခက်သောတစျရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးဝတ်စုံသင့်ရဲ့နော။ ပေမယ့်အသစ်အပလီကေးရှင်းပိုများသောစျေးကွက်နေ့၊အချို့ရှိနေဆဲရှိပါတယ်ပေါ့၊ဖြစ်နိုင်သည့်အမြဲစိမ်းနှင့်ဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှလိမ့်မည်မိမိတို့အလူကြိုက်များ။
ဘယ်အရာကိုအရွယ်ရောက်အန္းဒါကြောင့်ဂိမ်းစွဲလမ်း? ဒါဟာတစ်ဦးပုံပြင်၊ဂရပ်ဖစ်၊သို့မဟုတ်အလိုလူမျိုးကိုမူ၏။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအမှုဂိမ်းရဲ့ဦးတည်ချက်၊၊ဖြစ်နိုင်ခြေကစားခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဘတ်စ်ကားမှာဘူတာရုံသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခြေအနေအခါသင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလည်းအချိန်အများကြီးကစားရန်။ သင်ပျင်းစနေနေ့မှာညဥ့်အခါ? ဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုးစားနေပါတယ်သတ်ပစ်ရန်အချို့သောအချိန်ခဏအနားယူအားလပ်ရက်အပေါ်။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မှာရှိနှင့်အသင်တို့ပြုသမျှကို၊အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းများများအတွက်နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ကြ၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ပျော်စရာရှိသည်သင့်အားလပ်ချိန်။, ကိုပလက်ဖောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ်ဧကန်အမှန်ထူထောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ်နှိုက်ပြည့်စုံသောဂိမ်းပလက်ဖောင်း၊တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်သောအားဖြင့်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်။ အေရာင္ေအက္ပ္၏အပြည့်အဝဂိမ်း။ သူတို့ထဲကတချို့ကအရမ်းကောင်း၊အခြားသူများရုံပျမ်းမျှနေစဉ်၊အချို့အပိုင်အလွန်ထိပ်တန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တောင်မှနှင့်အတူခေါင်းစဉ်များ"အနက်"င့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားနှင့်ပြတင်းပေါက်များ။
သင်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊တစ်နေရာရာမှာကြား၏ဂျပန်ဂိမ်းအ Rapelay။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြေမှုန့်နှင်းပတ်လည်အတွက်ဂိမ်း ၂၀၀၉(သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဂျပန်)ကြောင့်ထားရန်ကစားသမား၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်ဒါခေါ် stalker-အဆင်မပြေသူလူတန်းစားအတွက်ပတ်ပတ်လည်တစ် raincoat နှင့်အောက်ပါအတိုင်းမိန်းကလေး။။။မရှင်းပြဖို့အသေးစိတ်အတွက်၊သင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဤဂိမ်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်နီးပါးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းဘန်ကီမွန်းက။ ထိုယိုထွက်၊အမှား၊အမှန်ကိုပထမဆုံးမဟုတ်သလိုနောက်ဆုံးအချိန်အလုပ်"eroge"ဂိမ်းနှင့်အတူအဆိပ္အေမျက်လုံးအလှအပအဖြစ်အရာဝတ္ထုများ၏လှုပ်ရှားမှုအတွက် ၁၈+ပရိသတ်ကို။, ထို့အပြင်၊ပြီးကတည်းက ၁၉၉၇၊သူတို့ပြန်လွတ်လာပါပြီ ၂၀ ကျော်ဂိမ်းများနှင့်ပြီတရားဝင်ပိတ်ပင်ရောင်းချခြင်းမှ၏အပြင်ဘက်တွင်။ ပြီးတော့၊သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိဘဝနှင့်အလုပ်ပျားရည်ကိုရွေးပါ။
ဘူးပင်လေးအနက်ဖော်ပြဖို့အဘယ်ကြောင့်ဒီဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်တော့မှမြင်စတိုးဆိုင်စင်ပေါ်အပေါ်၊မဟုတ်လိမ့်မည်သင်သည်အစဉ်အဆက်ကစားချင်ခြားလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ရလျှင်သင်မှာအားလုံး။ ပျားရည်ရွေးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဂၤါပြုရန်နှင့်ခဲ့သည်အထိအရှုပ်ထွေးဆုံးအစာ၊ပိုပြီးအတိအကျ၊အထက်တွင်ဆိပ္အေမျက်လုံးအလှအပနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ထို့နောက်"ထွက်ဆွဲထား"သာဘဝ။, အဲဒါကိုအားလုံးစွန့်ပစ်ရန်"အခြားဂိမ်းအဘို့အရှုး"ဂျပန်မဟုတ်ကြလျှင်ဤအဘို့အကြောင်းအချက်အားလုံးမှပံ့ပိုးသည်ပြည်နယ်ကို-ဂရပ်ဖစ်အနုပညာဖစ္ၿပီးတဲ့အပြင်အသွင်ဖန်ဆင်းကစားသမားလိုခံစားရသွင်မိန္းကေလးခဲ့ကြသည်မှန်၏ရှေ့မှောက်၌သူတို့ကို။
အဖြစ်ထူးဆန်းနှင့်ထူးဆန်းဒါကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို၏အပြင်ဘက်တွင်ဂျပန်၊အဆိုပါဂိမ်းအနေနဲ့ဖူးထိမှန်ပြီးသားစဉ်းစားအတွက်တော်လှန်ရေးဖြစ် VR နှင့်အရွယ်ရောက်ဖျြောဖွရေးစက်မှုလုပ်ငန်း။ စစ်မှန်တဲ့၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအတားအဆီးအပါး ၁၀၀ ယူရိုငွေပေါင်းနက္ခတ္တဗေဒစျေးနှုန်း၏အပြုရန်အစုံနှင့်အပြေးကြလိမ့်မည်ကြောင်းဒါကြောင့်အားလုံးအတွက်ကျေနပ်စပါတယ္။ တုန်းပဲ၊ကျွန်မတို့အံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်ဤကဲ့သို့သောဂိမ်းများအဖြစ်လာကြပါပြီကျယ်ပြန့်၏ပုံစံ VR ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက် ၁၈+ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်အဘယ်အရာကိုလာမယ့်ခြေလှမ်းနိုင်လျှင်မဟုတ်သာမြင်ရ၏အိပ်မက်မိန်းကလေးဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်?
အချို့အတွက်၊ဒီအသည်"လွယ်"၊အချို့သောအမြင်ဤမြေတပြင်လုံးပုံပြင်တစ်ခုအဖြစ်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊နှင့်အခြားသူများအကြားချင်ကြပါဘူး။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်၊ဒီအစာသားအကျိုးရှိမည်။ အဲဒီ"အထိခိုက်မခံ"သင်ယူပါလိမ့်မည်သစ်ကိုတစ်စုံတစ်ခုသောသူတို့အားလေ့လာသောတစ်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသိဖို့ဘယ်လိုအကြံပေး"အစိမ္းေရာင္"ႏွင့္ချင်ကြပါဘူးတဲ့သူတွေအကြောင်းကြားဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင်ယူပါလိမ့်မည်ဟူသောကေးရှင်းမှကွာနေရန်နှင့်ရန်ပလီကေးရှင်းအဘို့အကြည့်တဲ့အခါစတင်စစ်ဆေးနေထုတ်ကုန်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊စသည်တို့ကို။, အရွယ်ရောက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်း။ ၁၁၀၀၀ ညမ်းရုပ်ရှင်တွေအပေါ်ထွက်တိုင်း ၄၀၀ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေ၊နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်ကနေ PornHubေျပာတဲ့အန္းအသုံးပြုသူများကိုကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုမိမိတို့အပရိသတ်ကို။ ဤအရန်သင့်အားဦးဆောင်သောမေးခွန်းမေး၏အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းများသောအန္းသုံးပြုသူများကစားနိုင်ပါတယ်?
ဒါကအခက်ခဲမေးခွန်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲသင်ပေးမည်ဟုအချို့အားဖြင့်ကူညီပေးသည့်အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းမှရှောင်ရှားရန်၊ပြီးသူတို့ကိုတဖြစ်ပါသည် CyberFuck၊သင့်သောအတူတွဲဖက်ရှိကြ Cyberpunk ၂၀၂၀။ ညွှန်ကြားချက်အကြောင်းပြောဆိုကျေနပ်စရာအမျိုးသမီး။ သို့သော်၊ဒီအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ၊ဒီဂိမ်း၏ကောင်စုတ်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိပါကအကြောင်းကိုပဟေဠိ၊တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်စီမံခန့်ခွဲဖို့သေဖြေရှင်း။ Gotham ပန္လာေ၊အမြင်အာရုံဝတ္ထုတို့တွင်အရွယ်ရောက်အန္းဂိမ်းများ၊အနည်းဆုံးအပေးအခွင့်အမြင်မှအချို့လိင်။, Catwoman၊အဆိပ်အိုင်ဗီ၊Harley Quinn တိုက်ပွဲနှင့်အတူ Batman စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်၏ကွဲပြားခြားနားပုံများ။ ခက်ကိုဖော်ပြရန်၊ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာကရွေ့ဒီအ tits တဲ့ခုန်သည်၊အဖြစ်အင၊သာအခါသွားတက်ဆင်းနှင့်အတူ။ ဤကဲ့သို့တစ်ဦးရုပ်ပုံလွှာစာအုပ်။ အခြားအမြင်အာရုံဝတ္ထု၊ဒီဂိမ်းဟာအမင်းဆွဲဆောင်မှုမရှိနှင့်သင်နှိပ်အားဖြင့်ရိုးရှင်းသောအကွက်ပါ။